Shina Fampidirana hafanana madinidinika namboarina DII-240 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Nenwell
Vata fampangatsiahana hafanana indroa nosy DII-240
Matetika hita any amin'ny fivarotana lehibe sy fivarotana lehibe ny fivarotana nosy fivarotana. Ireto fampirantiana fampirantiana ireto no vahaolana tonga lafatra amin'ny fampisehoana vokatra be dia be raha mbola mamela ny mpanjifanao hijery mora foana ny entana rehetra atolotra.
Ny vata fampangatsiahana nosy dia mamela ny orinasa hampiasa am-pahendrena ny habaka rehetra azo apetraka ary hamorona faritra fivarotana mora aleha. Ao Nenwell, dia mitazona takelaka fitaratra sy takelaka misokatra amin'ny vata fampangatsiahana nosy izahay, hahazoana antoka fa afaka mahita ny sehatr'asa fampisehoana mety indrindra ho an'ny fivarotanao ianao.
Ity vata fampangatsiahana nosy maripana ambany ity dia mety amin'ny fironana mpivarotra zava-baovao, malefaka ary ekolojika indrindra. Ny maodely tsirairay dia manasongadina teknolojia manavao sy fitaratra feno fahamaotinana, jiro anatiny mamiratra ary fandraisana anatiny fotsy mba hahazoana antoka ny fampisehoana vokatra tsara indrindra.
Tsy azonao antoka hoe iza amin'ireo fampisehoana vata fampangatsiahana nosy no mety indrindra amin'ny orinasao? Aza manahy fa ny ekipan'ny mpanolotsaina efa za-draharaha dia vonona hanampy ary afaka miresaka anao amin'ny safidy rehetra azonao atao. Mifandraisa fotsiny amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny alàlan'ny fiasanay mivantana.
Teo aloha: Service Over Counter Supermarket Refrigerator CSS-2011SGA
• Ny mari-pana fiasan'ny faritra 3M1,3L2 faritra roa, ampiasaina amin'ny fampisehoana sy fivarotana ny vata fampangatsiahana hazan-dranomasina, hena sns. ho an'ny fampisehoana sy fivarotana trondro mangatsiaka mangatsiaka, hena mangatsiaka ary sakafo mangatsiaka
• ny fampiasana compresseur SECOP misy anarana iraisam-pirenena, mahomby amin'ny fampangatsiahana avo lenta, plug and play, mora ampiasaina
• ambany mari-pana indroa mari-pana indroa mari-pana, ny mpampiasa dia afaka manitsy arakaraka ny tinady
• Ny lavaka polyurethane dia mitambatra amin'ny fisolokiana mba hampihenana ny fanjifana mangatsiaka ary hampihena ny fanjifana angovo
• evaporator avo lenta ny faritra lehibe manify, manalefaka haingana, boky mahomby
• fametrahana mpandray rano manetona tena, mora ampiasaina, miangona ahiahy
• misy varavarana
Fahaiza-miaina tanteraka (L)
40 'HC Container Load
Vata fampangatsiahana vavahady tokana am-baravarana 100L amin'ny ...